🥇 ▷ Furayaasha Amniga Titanka Google ayaa loo sii daayay dalal badan ✅
Furayaasha Amniga Titanka Google ayaa loo sii daayay dalal badan
Markii hore oo keliya ayaa laga heli karaa Maraykanka, Google ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in furaheeda Titan Security uu hadda ku yaal Austria, Canada, France, Jarmalka, Italy, Japan, Spain, Switzerland, iyo Boqortooyada Ingiriiska. Laga bilaabo maanta, furaha amniga Titan USB-C ayaa laga heli karaa waddamadan, iyo Titan USB-C amniga qufulka iyo xirmada ayaa hadda laga heli karaa dukaamada Google ee Austria, Jarmalka, Talyaaniga, Spain, iyo Switzerland.
Furayaasha amniga Titan ee Google ayaa hadda laga heli karaa toban waddan oo bixiya furaha macluumaadka muhiimka ah ee dadweynaha si loo xaqiijiyo aqoonsiga iyo URL-ka boggaaga soo-gelitaanka si markaa kuwa wax weeraraya aysan u soo galin koontadaada xitaa haddii ay leeyihiin magacaaga isticmaale. ama eray sir ah Google wuxuu sii sharraxay:
“Si ka duwan qaababka kale ee xaqiijinta laba-arrimood (2FA) ee isku dayay inay hubiyaan soo-galitaankaaga, furaha amniga ayaa taageeraya heerka FIDO ee bixiya kahortagga ugu adag ee ka soo horjeeda botsomyada otomaatiga ah, weerarada jireed ee weyn, iyo weerarada jihooyinka tooska ah ee loo jeediyo.
Waxaan si xoogan ugula talineynaa isticmaaleyaasha khatarta sare leh ee weerarada lala beegsado (tusaale ahaan, kooxaha ololaha siyaasadeed, kuwa u ololeeya, suxufiyiinta, maamulayaasha IT, maamulayaasha) inay helaan furaha amniga Titan isla markaana ay iska diiwaangeliyaan Barnaamijka Badbaadinta Sare (APP). Haddii aad u shaqeyso koox olole siyaasadeed siyaasadeed federaal ah Waxaad hadda dalban kartaa furaha Titan Security oo bilaash ah adiga oo u maraya ololaha Digital Survival oo aad ka heli karto caawinta diiwaangelinta barnaamijka APP. Amarada faraha badan waxaa sidoo kale laga heli karaa ururada shirkadaha wadamo gaar ah.
Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa furaha amniga Titan bog kasta oo furayaasha amniga FIDO ay la jaan qaadayaan 2FA, oo ay ku jiraan shaqsi ahaantaada ama shaqada Google akoonka, 1 Keywords, Bitbucket, Bitfinex, Coinbase, Dropbox, Facebook, GitHub, Salesforce, Stripe, Twitter iyo qaar kaloo badan “
Soo-saarkii qalabkii ugu dambeeyay ee Geeky